Life Nepali – Page 112
जापान पुगेको ३ महिनामा नै संसार छो’ड्नु पर्यो
1 ‘मोदीले बुद्ध भारतका हुन् भन्दा ग’लत नहुने ! ओलीले राम नेपालका हुन्, भन्दा गलत हुने ?2यी युवतिले भिडियोमै कपडा खो’लेपछी ईन्टरनेटमा भा’इरल ! ( भिडियो हेर्नुहोस )3‘भारत स्थित नेपाली दूतावास अगाडि नेपालीले नै भारतको समर्थनमा गरे प्रदर्शन’4कोरियाबाट नेपालीहरुका लागि आयो अहिलेसम्मकै खुशीको खबर, !5सु’र्तीजन्य सेवनले दाँत बि’ग्रिएको छ भने अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय, चमकदार हुनेछ दाँत !
काठमाडौँ। नेपाली फिल्म क्षेत्रका धेरै जसो कलाकार अभिनयलाई लिएर भन्दा पनि बोलिलाई लिएर चर्चामा आउने गरेका छन् । कोही होस् नपुर्‍याएर बोल्दा विवा दमा तानिएका छन् भने कोही बढी बोलेर । कलाकारको बोल्ने तरीकालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल कलाकार महासंघले समेत सम्यमीत भएर आफ्नो कुरा खाख्न आग्रह गरेको छ । बोलिका ...
नेपाल भारत सीमा क्षेत्र खा’ली गर्नुस्, खोला नालामा पिल्लर गा’,ड्नुस् – सरकारलाई समितिको निर्देशन
काठमाडौँ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र खा’ली गर्नु, खोला नालामा पिल्लर गा’,ड्नु : सरकारलाई समितिको निर्देशन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र खा’ली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र त’टबन्धबारे छलफल गर्न बसेको समिति बैठकले त्यस क्षेत्रमा ...
कर्मचारीको पा*ता कस्ने कानुन बन्दै छ :मन्त्री पण्डित
पत्रकारलाई कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेको मिडिया सोसाइटीकाे ठहर
ह्रृदयदेखिको कामना यत्ति छ रवि लामिछाने नि*र्दोष सावित हुन् : रवीन्द्र मिश्र
पहिलो पटक नेपालमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको भर्ती रोकियो”
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रीरामको जन्मभूमी अयोध्या नेपालमै पर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। केहिले ओलीको यस किसिमको अभिव्यक्तिले नेपाल-भारतको सम्बन्ध बिगार्ने बताइरहेका छन् भने केहिले ओलीको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै वास्तविकता बारे अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताइरहेका छन्। सोमबार भानुजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रामको जन्मभूमी अयोध्या नेपालको ...
सउल, ३० असार – दक्षिण कोरियामा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ का बाट लागू हुने गरी ज्याला निर्धारण समितिले कोरियामा श्रम गरिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी मजदूरको ज्याला १३० कोरियन वोन बढाएको हो । योसँगै नेपालीको पनि तलब बढेको हो । मजदूर सङ्घका प्रतिनिधि, ...
काठमाडौँ। लाहुरे परिवारमा हुर्किएका बाँकेका सरोज मगर यो वर्ष खुल्ने ब्रिटिस आर्मी छाति नपाउने सुरमा थिए। लाहुरे बन्न चाहिने शारीरिक अभ्यासलाई तिखार्ने भन्दै घरपरिवारको सल्लाहमा २०७६ चैत १ गते पोखरा आए। लामाचौस्थित गोर्खा फिटनेस सेन्टरको होस्टलमा बसेर पूर्वअभ्यास सुरु गरेको एक हप्ता बित्न नपाउँदै नेपाल सरकारले कोरोना महामारीका कारण लकडाउन ...
नेपालमा पहिलोपटक सांसदमा पनि कोरोना संक्रमण भेटियो !
सोमबार पीसीआर परीक्षण गरेका कर्णाली प्रदेशका एक सांसदको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कर्णाली प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए। ती मन्त्रीका अनुसार ती सांसदलाई अहिले आइसोलेसनमा राखिएको छ। ‘एक जना सांसदको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उहाँलाई अहिले आइसोलेसनमा राखिएको छ’, ती मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने। यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको भए पनि ...
प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान भारतसँग सम्बन्ध सु’धार्नेभन्दा बिगार्ने तर्फ – कमल थापा
काठमाडौँ, ३० असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नेभन्दा बिगार्ने तर्फ गएकाे बताउनुभएकाे छ । अध्यक्ष थापाले सामाजिक संजाल ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, ‘भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नेभन्दा बिगार्ने तर्फ प्रमको ध्यान गए जस्तो लाग्छ । नक्सा प्रकाशित गरेर अतिक्रमित भूमी ...
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको कोरोना परीक्षण गरिने”
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गरिने भएको छ । शुक्रबार चितवन जानुभएका अध्यक्ष दाहाल आज काठमाडौं फर्कँदै हुनुहुन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले काठमाडौ फर्कर्ने क्रममा बाटोमा रहनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। काठमाडौं फर्के लगत्तै उहाँको कोरोना ...
नेपालको नयाँ नक्सा सबै मिलेर जारी गरेको हो, कोही महान्-राष्ट्रवादी कोही द’लाल छैन – प्रचण्ड
काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरूलाई उक्साउने प्रवृत्ति रहेकोले सावधान रहनु पर्ने बताएका छन्। ‘हामी नेताहरूलाई एउटाले गएर केपीलाई प्रचण्डलाई छोड्न हुन्न भनेर उक्साउने। अर्को आएर प्रचण्डलाई केपीलाई छो'ड्न हुन्न भनेर उक्साउने प्रवृत्तिहरूप्रति सा'वधान रहन र तपाईंहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने त्यहाँनेर हो,’ नेकपा चितवनले आइतबार गरेको ...
चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकतालाई जोगाउन आफूले संघर्ष गरिरहेको बताउनु भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकाभित्र बाढी प्रभावित विभिन्न स्थानहरूकाे अवलोकन पश्चात माडीमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो बताउनुभएको हो । कोरोनाको परिवेश देखाएर केही तत्व ...